Tsipy kanetibe - TIPA 2018: Tsara fikarakarana ny solontena malagasy
lundi, 16 avril 2018 10:20
Ekipa Malagasy roa no tonga taty Abidjan Côte d’Ivoire nandray anjara tamin’ny Tournoi International de Pétanque d'Abidjan (TIPA) dia ny ekipam-pirenena sy ny ekipa tompondaka erantany.
Raraka avokoa ny solontena Malagasy, nihintsana teo amin’ny ampahefa-dalana ny ekipantsika tompondaka erantany, ny faharoa indray raraka teo amin’ny manasa-dalana, izany hoe laharana fahatelo niaraka tamin-dry zareo Maraokana. Norombahin'ny Ivoariana mpampiantrano ny anaram-boninahitra.
Nianto-tena ny tompondaka erantany tonga taty, ny ekipa nasionaly kosa dia ny Federasiona no niantoka azy ireo, fa ny indro kely dia somary nisy olana teo amin’ny “Visa” ry zareo. Tsy nisy voaloa ny vola ka somary niteraka fikorontanana kely teo amin’ny lalao.
Nanao izay azony natao ny Consul malagasy teto Cote d'Ivoire, Kashab Mahamade sy ny Malagasy et Amis de Madagasikara en Cote d'Ivoire (MAMCI) izay fikambanan'ny Malagasy monina aty Cote d’Ivoire. Noraisin’ny Consult an-tanana ny fandoavana ny “Visa”.
Tao aorian'ny lalao dia noraisin'ny Consul sy MAMCI ireo solontena Malagasy. Niara-nikorana ny rehetra.
Teratany Libaney ny Consul-n’i Madagasikara eto Cote d'Ivoire. Tompon’ny orinasa Pêche et Froid ao Antsiranana izy ary manana orinasa maro hafa eto Cote d'Ivoire.